I-12th China Exhibition New Chumisa New ufikelele kwisigqibo ngempumelelo.
ngomphathi ku 2021-06-25
I-12th China Exhibition New Chumisa New ufikelele kwisigqibo ngempumelelo. Enkosi ngokuza kwakho! Emva kweminyaka elishumi elinanye yophuhliso, uMboniso we-FSHOW Umanyolo uye waba ngumboniso omkhulu we-China International Agrochemicals and Exhibition Protection Exhibition (CAC). Z ...
Umboniso wase China wamazwe ngamazwe oManyolo (FSHOW)
ngomphathi ku 2021-05-28
I-YiZheng Heavy Machinery Co, Ltd. izakubonisa i-FSHOW2021 ukusukela nge-22 ukuya kwi-24 ku-20, 2021 e-Shanghai New International Expo Centre. China International Umanyolo New Exhibition (FSHOW), iye yakhula ibe intsimi isichumiso kwelona 'ilizwi kakhulu lomlomo' yenye i ...
Ngama-22 i-China yamazwe ngamazwe i-Agrochemical & Exhibition Protection Exhibition
ngomphathi ku 2021-04-28
FSHOW2021 iya kubanjelwa e-Shanghai New International Expo Centre ukususela ngoJuni 22-24, 2021. Ngelo xesha, Zhengzhou Yizheng Heavy Industry Machinery Co., Ltd. uya kuthatha inxaxheba umboniso ukukhuthaza ukutshintshiselana kushishino kunye nentsebenziswano kwishishini. Samkela ulwazi oluphambili nolutsha kuzo zonke iindlela ...
Amanqaku alandelayo kufuneka anikwe ingqalelo ngexesha lenkqubo yokuvumba komgquba weegusha
ngomphathi ku 2020-09-21
Ubungakanani bamasuntswana ezinto eziluhlaza: ubungakanani bamasuntswana omgquba weegusha kunye nezinto ezincedisayo ezingafunekiyo mazibe ngaphantsi kwe-10mm, kungenjalo kufuneka zityunyuzwe. Ukufuma okufanelekileyo: ukufuma okuphezulu kwe-composting microorganism ngama-50 ~ 60%, ukufuma komda ngama-60 ~ 65%, ukufuma kwezinto eziphathekayo yi-adju ...
Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo kulondolozo lomgquba wehagu yemveliso yemveliso yezichumiso?
Izixhobo zomgquba wehagu zifuna ukunakekelwa rhoqo, sinika ulondolozo oluneenkcukacha oludingayo: gcina indawo yokusebenzela icocekile, ngalo lonke ixesha emva kokusebenzisa isichumisi esinezinto eziphilayo kufuneka ususe amagqabi egranulation kunye nembiza yesanti yegranulation ngaphakathi nangaphandle kweglu yentsalela, ...
Uyicutha njani ngokufanelekileyo inkunkuma yezixhobo zokusebenza kwezixhobo zokuchumisa eziphilayo
Inkunkuma yendalo esetyenziswa sisixhobo sesichumiso sendalo ikakhulu zezinto ezinomhlwa, ngenxa yoko kufuneka sisebenzise iilori ezivaliweyo ukuqokelela nokuhambisa inkunkuma. Ezi nkunkuma zezinto eziphilayo zilula ukukhupha ivumba elibi, elingabangeli kungcoliseko lwendalo kuphela, kodwa lenza ingozi enkulu ...
Zhengzhou Satu Zheng Heavy Technology Oomatshini Co, Ltd 2018 Rapat Ringkasan Tahunan
Zhengzhou Yizheng co enzima oomatshini mveliso co., LTD. Uyibambe ngempumelelo intlanganiso yesishwankathelo yonyaka ka-2018 kwimeko yolonwabo kunye noxolo, ushwankathela umsebenzi wonyaka ophelileyo, wafumanisa iziphene, i-2019 yenza iinzame ezingapheliyo, yenza okuqaqambileyo!